UAmosi Cabin - ubunewunewu ezintabeni emlanjeni.
Uhlaziyo lwe-COV19: Sivulelekile ukwabelana ngale ndawo yendalo ngala maxesha angaqhelekanga. Silawula iiprothokholi ezingqongqo zokucoca iblitshi phakathi kweendwendwe kwaye sikhuthaza ukuhamba kwindlu ngendlu.
I-Amos Cabin yeyona ndlu ilungileyo kwi-Pietsch Pit. Indawo ephambi komlambo i-4.5 acre ineekhabhathi ezi-5 kwaye le yiGEM. Umngangatho obanzi, indawo yomlilo engaphezulu enemibono enomtsalane, igumbi lokulala lenkosi elikumgangatho ophezulu, ikhitshi elivulekileyo, kunye nendawo yomlilo evuthayo kwigumbi lokuhlala ayisayi kudanisa.
Ikhitshi elivulekileyo eligcwele intsimbi engenastained yezemidlalo, iitops zekonkrithi, indawo yokuhlala yesitovu esibaswa ngamaplanga, kunye negumbi lenkosi elikumgangatho ophezulu elijonge umlambo. Idesika enkulu, ibhafu eshushu ngasemlanjeni, kunye negumbi lomlilo elimangalisayo. Kulala abantu abadala aba-4 kunye nabantwana ababini.
55" HDTV ene-I-Amazon Prime Video, I-Disney+, I-Fire TV, I-HBO Max, I-Netflix, I-Roku
4.93 · Izimvo eziyi-83
I-Index ibekwe kumazantsi eentaba zeCascade Mountains; incopho yeMount Index ikumgama oziikhilomitha ezi-3 (4.8 km) emazantsi edolophu. Iindonga zeDolophu ye-Index, amawa egranite ukuya kuma kuma-500 eemitha (150 m) ukuphakama, abekwe kumda osemantla wedolophu. Ezi ndonga zisetyenziswa kakhulu ekunyukeni kwamatye, zibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokuqhekeka komgangatho ophezulu kule njongo. Ngokuka-United States Census Bureau, idolophu inommandla osisi-0.23 seemayile (0.60 km2), yonke indawo.
I-Index ibekwe kuMlambo i-North Fork Skykomish, kanye ngentla nje kokudibana kwayo nomjelo oyintloko woMlambo i-Skykomish. I-Skykomish River's Sunset Falls, malunga neemitha ezingama-300 ubude (91 m) yegranite chute eyehla kangangeemitha ezingama-100 (30 m), ibekwe malunga nekhilomitha enye (1.6 km) ukusuka edolophini (kuMfula iFork Skykomish). NgoDisemba ka-1980, umlambo waseSkykomish waphuphumalisa idolophu watshabalalisa amakhaya asibhozo.
Idolophu ikumgama weemayile ezi-1 (iikhilomitha ezi-1.6) emantla e-US Highway 2, malunga neekhilomitha ezingama-40 ngasentshona kweStevens Pass. Umzila kaloliwe we-BNSF, owawusakuba nguLoliwe oMkhulu waseMantla, uhamba phakathi edolophini. I-Index yayikhe yayindawo ebalulekileyo yokumisa imigodi (ingakumbi i-Monte Cristo ne-Galena) kunye nemisebenzi yemithi emantla kwindawo yayo.